FIKAMBANANA TANANA MADIO : Manomboka ny fanangonana fako sy fanadiovana an’Ambanja
Mitohy ny asa fanadiovana tanàna ataon’ny fikambanana antsoina hoe « Association tanana madio » izay tarihin’i Sassan ao an-tampon-tanànan’Ambanja. 17 octobre 2019
« Tsy mendrika ny tanànan’i Sambirano ny milomano anatin’ny loto ary samy tompon’andraikitra ny rehetra amin’ny fanadiovana ny tanana sy famerenana ny lazan’ity farany », hoy i Sassan. Tsy nisalasala araka izany ity farany nandray andraikitra mifanandrify azy amin’ny maha zanatany ny tenany. Manohana azy amin’ny asa fanadiovana ataon’ny fikambanana izay tarihiny ireo namana any dilambato anisan’izany ny any Brest.
Nanomboka tamin’ny herinandro teo ny asa fanadiovana ny tanànan’Ambanja ataon’izany fikambanana izany ary efa hita sahady ny vokany. Tsy vitsy ireo mpandraharaha any an-toerana resy lahatra amin’ny asa ataon’ity fikambanana ity ka tsy nisalasala nanohana ny ezaka ataon’ity farany. Nanomboka nanangona fako ny fikambanana tamin’ity herinandro ity ka anisan’izany ireo fako nivangongo nampiteny ny moana teny amin’ny lalam-pirenena faha 6 manakaiky ny Bazary Tsaramandroso. Sarotiny amin’ny fampandrosoana ny tanànan’Ambanja i Sassan ka nahatonga azy nilatsa-kofidiana ho Ben’ny tanàna amin’ny fifidianana ho avy izao ary mitondra ny loko Ird.